Afhayeenka baarlamaanka Puntland oo kormeer ku sameeyey dhismaha cusub ee hoolka Golaha Wakiillada. – Radio Daljir
Maarso 12, 2012 12:00 b 0
Garowe, Mar 12 – Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ee DPL Cabdirashiid Maxmed Xirsi ayaa saaka kormeeray halka uu marayo Dhismha Golaha Wakiilada, kaasoo dhawaan dhammantiis la dumiyey, dumintaanka ayaa waxaa ay timid ka dib markii sidoo kale dayactir balaaran lagu sameeyey dhismaha xafiisyada ee Golaha Wakiillada DPL, iyadoo ay ka qeyb qaadatay dhismahaas Hay’ada Afrika u qaabilsan Hawlaha Baarlamannada ee loo yaqaan AWEPA.
Dhismaha xafiisyadaas ayaa ahaa mid duugoobay oo mudo 20 sano ah aan helin wax dayactir guud ahaan xafiisyadaas oo ka kooban 11 xafiis hataana dhamanatood la dhamaystiray.
Dhismaha Hoolka cusub ayaa waxaa fulinaya xukumaada DPL, iyada oo uu balan qaaday Madaxweynaha DPL xilli uu furayey Dhismihii Cusubaa ee haatan la dhamayeey, kaasoo ku beegnaa kalfadhigii 26-aad ee Golaha Wakiilada ee Dawlada Puntland.
Haddaba kormeerka Guddoomiyaha ayaa imanaya ka dib markii ay xukuumadu ku dhawaaqday Aftida Dastuurka DPL in la qabanayo afti u qaadida dastuurka 15 bisha Aprill 2012.
Aftidaas oo loo qaadi doono mid kooban Ergooyin ka kala imanayaa Dhamaan Gobolada Puntland tiradooduna ay dhan tahay 480-xubnood
Isla mar ahaantaana halka doorashda Aftidu ay ka dhici doonto Xarunta Golaha Wakiilada ee DPL, taasoo haatan Dhismaheedii gacanta lagu hayo lana doonayo in la dhameeyo bishan.
Dhismahan ayaa ahaa mid aad u balaaran waxaana dhamaantiis maalglinaya Xukuumada uu Madaxda ka yahay Dr, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed ( Faroole) waxaana Fulinaya Shirkada Dhismaha ee Mubaarak Construction Company
Eng. Cabdiraxmaan Salaad oo ah Eng-ka haatan gacanta ku haya ayaa sheegey inay ku dadaalayaan in la dhamaystirayo bishan, dhismahan Dhamaantiis intii badnayd la dhisay hawshuna ay sidii loogu talo galay u socoto.
Il – puntlandparliament.org
Madaxweyne Obama oo sheegay in aanay ku degdegayn ka bixitaanka dalka Afghanistan
Puntland oo laga bilaabay ololaha maalmaha caafimaadka carruurta, hawlgalkaasi oo socon doono muddo 7 cisho ah.